उपत्यकामा खोप अभियान उत्साहजनक, ४१ प्रतिशतले लगाए खोप | Nepal Khabar
उपत्यकामा खोप अभियान उत्साहजनक, ४१ प्रतिशतले लगाए खोप
काठमाडौँ उपत्यकामा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउनेहरुको संख्या उल्लेख्य रुपमा बढेसँगै यस पटकको दसैँ गत सालको तुलनामा सुरक्षित हुने संकेत देखिएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार आइतबारसम्म काठमाडौँ उपत्यकाको ४१ प्रतिशतलाई दुवै मात्रा खोप लगाइसकिएको छ।
काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको साढे ३२ लाख जनसंख्यामध्ये ४१ प्रतिशतलाई दुवै मात्रा खोप लगाइसकिएको मन्त्रालयका खोप शाखा प्रमुख सागर दाहालले जानकारी दिए। पहिलो मात्रा खोप लगाउनेको संख्या तीन जिल्लामा ५० प्रतिशत पुगेको समेत उनले बताए।
मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार तीनवटा जिल्लाका १५ लाख ५५ लाख ८९५ नागरिकले पहिलो मात्रा र १३ लाख ११ हजार ८२० जनाले दुवै मात्रा खोप लगाइसकेका छन्।
मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार काठमाडौँमा १८ वर्षमाथिका १४ लाख ९१ हजार ३२४ जनाले खोप लगाउनुपर्ने छ। जसमध्ये ७६ प्रतिशतले पहिलो डोज र ६२.५ दोस्रो डोज खोप लगाइसकेका छन्।
यस्तै भक्तपुरका २ लाख ४५ हजार ४१३ मध्ये ६३ प्रतिशतले दुवै डोज खोप लगाएका छन्। ललितपुरको खोप लगाउनुपर्ने जनसंख्या ३ लाख ८० हजार ६३० मध्ये ६९ प्रतिशतले पहिलो डोज र ५८ प्रतिशतले दोस्रो डोज खोप लगाएका छन्।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले उपत्यकामा खोप लगाउनेको संख्या ४० प्रतिशतभन्दा माथि हुँदा केही सुरक्षित महसुस भए पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न छाड्न नहुने बताए।
‘अग्रपंक्तिमा खटिएका सबैलाई र प्राथमिकताका आधारमा पनि उपत्यकामा ४० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यामा खोप पुग्नु सुखद् कुरो हो,’ उनले भने, ‘चाँडो भन्दा चाँडो आगामी दिनमा पनि खोप उपलब्धताका आधारमा सबैलाई लगाउँदै गइनेछ। तर, खोप लगाएकाहरुबाट पनि संक्रमण सर्ने जोखिम रहने भएकाले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न भने छाड्नु हुँदैन।’
सरकारले १८ वर्षभन्दा माथिका ७१.६ प्रतिशत अर्थात् कुल दुई करोड १७ लाख ५६ हजार सात सय ६३ जनालाई खोप लगाउने लक्ष्य राखेको छ। आइतबारसम्म कुल जनसंख्याको २० प्रतिशतले पहिलो डोज र १८ प्रतिशतले दुवै मात्रा खोप लगाइसकेका छन्।
देशभर कोभिसिल्ड पहिलो मात्रा २६ लाख १ हजार तीन सय २० र दोस्रो मात्रा १४ लाख ६४ हजार १११ जनाले लगाइसकेका छन्। यस्तै भेरोसेल पहिलो मात्रा ३६ लाख एक हजार ९९६ र दोस्रो मात्रा २७ लाख ५ हजार १११ जना तथा जोन्सन एन्ड जोन्सन १४ लाख ९ हजार ६४३ जनाले लगाइसकेका छन्।
सरकारले आगामी असोजसम्म लक्षित वर्गको ३३ प्रतिशत र चैत मसान्तसम्म लक्षित सबैलाई खोप लगाइसक्ने योजना बनाएको छ। असोज मसान्तभित्र एक करोड पाँच लाख ४८ हजार मात्रा खोप र चैतसम्म तीन करोड २३ लाख मात्रा खोप लगाइसक्ने योजना छ।
सरकारले १२ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई मोडर्ना र फाइजर खोप ल्याउने तयारी समेत गरेको छ। काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै १८ वर्षमुनिका खोप लगाउनुपर्ने १० लाख जना रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
मोडर्ना ४० लाख र फाइजर ६० लाख मात्रा ल्याउने तयारी छ। मोडर्नाका खोपका लागि भुक्तानी भइसकेको र फाइजरका लागि विश्व बैंक तथा गाभीको सहकार्यमा भुक्तानीको तयारी गरिएको छ।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनले बढीभन्दा बढी जनसंख्यालाई खोप लगाउँदा अस्पतालमा बिरामीको चाप पनि घट्ने भएकाले सुरक्षित अनुभव हुने बताए। खोप बढीलाई लगाउँदा तेस्रो लहरको सम्भावना पनि घटेर जाने उनले बताए।
‘४० प्रतिशत बढीमा खोप लगाउनु भएको केही सुरक्षित भएको भनेर पनि हेर्न सक्छौँ। खोप जति लगायौँ, उति गम्भीर बिरामी पर्ने, अस्पताल आउने सम्भावना कम हुन्छ,’ पुनले भने, ‘कम मानिस अस्पताल आए बिरामीले गुणस्तरीय सेवा पाउने र ज्यानै जाने सम्भावना कम हुन्छ। यसले तेस्रो लहरको सम्भावना पनि घटाउँछ।’
तर, खोप लगाउँदैमा संक्रमण नै नहुने नठान्न उनले आग्रह गरे। कुल जनसंख्याको ७०–८० प्रतिशतलाई खोप लगाए सुरक्षित मान्न सकिने उनको भनाइ छ। तर खोप लगाएका मानिसहरुबाट पनि संक्रमण सर्ने भएकाले दसैँमा गाउँघर जादा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न उनले सुझाव दिए।
चीनबाट खरिद गरिएको कोभिड–१९ विरुद्धको ४४ लाख डोज खोप नेपाल आइपुगेको छ। चीनबाट खरिद गरेको ६० लाखमध्ये १६ लाख मात्रा खोप यसअघि नै आइसकेको थियो।
प्रकाशित: September 21, 2021 | 07:13:02 असोज ५, २०७८, मंगलबार
शिक्षामन्त्री पौडेललाई भेटे डा. गोविन्द केसीले
काठमाडौं उपत्यकामा जोरबिजोर नियम किन? यसो भन्छ प्रशासन
पहिरोले बन्द नारायणगढ–मुग्लिन सडक खुल्यो
नवनिर्मित बुद्धको मूर्ति
मोरङमा सडकको आगो ताप्ने विषयमा विवाद हुँदा ट्रक चालकको कान काटियो
काठमाडौंका केही निजी विद्यालय अझै बन्द नभएपछि महानगरले दियो कारबाहीको चेतावनी